Imodeli yentloko yasestereo yohlobo lweC3 yokwenziwa kunye nefektri | NUEVASA
Ukusuka kwimbono yophuhliso lweshishini lokulalelwayo liphela, iiseti zentloko ezingenazingcingo iseyinto entsha, kwaye nexesha lophuhliso alikho lide. Kukwithuba elinyukayo. Izidingo zomsebenzisi ziyaqhubeka nokwanda, kunye nokulindelwa ngabasebenzisi kwiihedisethi ezingenazingcingo nazo ziyanda. Yile nto icetyiswa lushishino. Uvavanyo olutsha. Okwangoku, amanqaku aphambili abona bantu baxhalabileyo malunga nawo kubandakanya umgangatho wesandi, ubomi bebhetri kunye namandla okudlulisa ngaphandle kwamacingo. Ukusuka kwindawo yokujonga idatha, amandla okudlulisela ngaphandle kwamacingo anokuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi, kwaye kusekho ukubanakho okuphuculayo kumgangatho wesandi kunye nobomi bebhetri. Ukuqala ngamanqaku amabini okuphucula, ndiyakholelwa ukuba kuya kuba lula ukutsala umdla wabasebenzisi kwixa elizayo.
Ewe, ii-headphone zinokwahlulahlulwa zibe ziindidi ezininzi. Ii-headphone zihlelwa ngokweendlela zazo zokuguqula amandla, ikakhulu kubandakanya: ukuhamba kwekhoyili, intsimbi ehambayo, i-electrostatic kunye ne-isomagnetic. Ukusuka kwiindlela zokwakha kunye nokusebenza, inokwahlulwa-phakathi kuvulwe kwaye kuvaliwe; ukusuka kwifomu yokunxiba, kukho izinto zokufaka iindlebe, iindlebe ezijingayo, endlebeni kunye neentloko; Ukusuka kwinani labanxibayo, kukho ii-earphone ezizodwa kunye nee-Multi-person earphones; eyahlukileyo kumthombo wesandi, inokwahlulahlulwa ibe zii-earphone ezisebenzayo kunye nee-earphone ezenziwayo; ii-earphone ezisebenzayo zikwabizwa ngokuba zii-earphone zekhadi.
Le mveliso yamkela uyilo kwindlebe, ihambelana ngokugqibeleleyo nomgangatho we-ergonomic, ifana nolusu oluthambileyo lwezixhobo zejelica, ikunika intuthuzelo evela ngaphakathi nangaphandle. Yizisa ukonwaba komculo ngokukhululekileyo.
Egqithileyo Imodeli yokusetha i-headset eyiyo
Iseti yesandla yeBluetooth
I-Bluetooth Phone Iseti yentloko
I-Bluetooth Stereo Iseti yentloko
Izandla Zasimahla Iseti yentloko
Kwindlebe Pro Gamer
Iseti yentloko yeBluetooth efanelekileyo
Iseti yentloko yezemidlalo
Iseti yentloko engenazingcingo yeBluetooth
Stereo Iseti yentloko engenazingcingo